Ahoana ny fomba handaminana ny fianaranao any an-trano
Posted by Tranquillus | Oct 9, 2020 | Ao amin'ny tranonkala
Ity fampianarana ity dia ho an'ny olona izay, na misy antony iray hafa, tsy maintsy mianatra any an-trano, irery, tsy misy mpampianatra. Voalohany, hianarantsika ny mametraka tanjona kendrena amin'ny fianarana ho an'ny tenantsika. Avy eo dia hianarantsika ny fomba handrafetana ny asanay sy ny lisitray ireo fomba mahomby indrindra amin'ny fianarana samirery. Avy eo, hamafiso ny fahalalantsika ny fandraisana an-tsoratra, ny fanaovana tsianjery, ny fiaraha-miasa, ny fanadinana ary ny kolontsaina. Misy 11 ny fivoriana fohy sy mivantana. Handray an-tsoratra !
Mirary fiofanana tsara ho anao!
Ahoana ny fomba handaminana ny fianaranao any an-trano 12 Desambra 2020Tranquillus
HAMAKY Fampiroboroboana ny fanatanjahantena any am-piasana: tsy misy anjara amin'ny anjara biriky ara-tsosialy nofaritan'ny lalàna momba ny famatsiam-bola sosialy 2021
Teo alohaMampiasa tsara verba frantsay
manarakaMiresaka momba ny tsiro sy fialamboly toy ny teratany!
Noteren'ny mpampiasa ahy hiasa mandritra ny tsy fananan'asako ampahany: inona no hatao?
Ny risika ara-tsaina
Fiadidiana frantsay ao amin’ny Vondrona Eoropeanina: fanamafisana ny fiaraha-miasa eoropeanina manoloana ny krizy cyber
Fampiasana an-tariby: manan-jo hanana tapakilan-tsakafo ianao?